Smartphones အသုံးပြုသူ တွေရဲ့84% က အိပ်ယာထတာနဲ့ Apps တွေအသုံးပြုကြ။ ~ The ICT.com.mm Blog
Smartphones အသုံးပြုသူ တွေရဲ့84% က အိပ်ယာထတာနဲ့ Apps တွေအသုံးပြုကြ။
မနက်အိပ်ယာထရင် ပထမဆုံးသင်ဘာလုပ်သလဲ? ရေချိုးတာလား၊ ကျန်းမာရေးအတွက်လမ်းလျှောက်ထွက်လား၊ဒါမှမဟုတ်ကော်ဖီသောက်သလား။
Smartphones အသုံးပြုသူတွေရဲ့ 84% က အိပ်ယာထတာနဲ့ Weather,၊ Social Media, News တွေကိုကြည့်ကြတယ်လို့ စစ်တမ်းတစ်ရပ်ကဖော်ပြပါတယ်။
Statista က စစ်တမ်းပြုလုပ်ထားတဲ့ အောက်ကပုံမှာတော့ Smartphones အသုံးပြုသူတွေ မနက်အိပ်ယာထရင်အသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့ Apps တွေကို ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်။ လူတွေ အကြည့်ဆုံး App ကတော့ Email App ပဲဖြစ်ပါတယ်။
စာဖတ်သူရော မနက်အိပ်ယာထတာနဲ့ဘာလုပ်သလဲ? Smartphone က ဘယ်လို App တွေသုံးလဲ ဆိုတာ ကွန်းမန့်ရေးပေးခဲ့ပါအုံး။
Newer HTC One Max ကို ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာ UK မှာ၀ယ်ယူနိုင်တော့မည်။
Older ရထားပေါ်မှာအိပ်ပျော်သွားတဲ့ကလေး တစ်ယောက် (၂၆) နှစ်ကြာမှ Gogle Earth ကိုအသုံးပြုပြီး အိမ်ပြန်ရှာတွေ့။
Smart Phoneရဲ့ Cameraကို အသုံးချနည်းများ
သင့် Smart Phoneရဲ့ Cameraဟာ Photo,Videoတွေ ရိုက်ဖို့အတွက်သာ အသုံး၀င်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဈေးသက်သာတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ရှာ၀ယ်ဖို့၊ ဘာသာပြန်ဖို့၊...
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသည် ၎င်း၏ပြည်တွင်းတွင် ထုတ်လုပ်သောစမတ်ဖုန်းကို ထုတ်ဖော် မိတ်ဆက်ခဲ့ကြောင်း AFPသတင်းတစ်ရပ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ လေ့လာသ...
Hp မှ တကယ်ပဲ smart phone ထုတ်လုပ်လိုက်သလား ???
ပြီးခဲ့သည် ့လအနည်းက hp ကုမ္ပဏီသည် ၄င်းအနေဖြင့် smart phone လောကသို့ ပြန်လည်၀င်ရောက်မည့် အစီအစဉ်ရှိကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်သည်။ အဆိ...
LG Electronic Incမှ သူတို့ရဲ့ Full HD Screenပါဝင်တဲ့ Smart Phone အသစ်တစ်လုံးဖြစ်တဲ့ LG Optimus G Proကို ဂျပန်မှာ ဖြန့်ချိမယ့် ဧပြီလ မတိ...
LGဟာ MWC 2013 ပွဲမှာ သူတို့ရဲ့ Optimus L Series IIများကို ပွဲထုတ်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုတင် ခန့်မှန်းခဲ့ကြတဲ့ အတိုင်းပဲ ဒီ L Series IIဟ...
ဂျပန်နိုင်ငံအခြေစိုက် နာမည်ကျော် နည်းပညာ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Sonyဟာ စမတ်ဖုန်းလောကမှာ Xperia Series ဖုန်းတွေနဲ့ ထိုးဖောက်၀င်ရောက်လာပြီး ...